Apple waxay cusboonaysiisaa safka 'ipad' iyadoo la soo bandhigayo nooc cusub oo ah 'inch' 10,2 inch - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Apple waxay cusboonaysiisaa safka 'ipad' iyadoo la soo bandhigayo nooc cusub oo ah 'inch' 10,2 inch
Furaha Apple ee 10 Sebtember wuxuu hodan ku ahaa xayeysiinta. Alaabooyin badan oo cusub ayaa la soo bandhigay, oo ay ku jiraan ipad cusub, oo soo bandhigaya cabbirka loo yaqaan '10,2 inch', si uu u yimaado waxoogaa yar oo bararsan. Soo bandhigida kiniinkan cusub.
Sida laga soo xigtay Apple, 9,7 inch iPad waxay ka mid tahay kuwa ugu caansan ee kala duwan. Tanina maahan wax la yaab leh markii aad tixgeliso in shirkadda Cupertino ay horay u soo saartay moodal 9,7 ah oo casriyeysan oo aad uga raqiisan isla markaana lafteedu u taagan tahay heerka gelitaanka macaamiisha go'aansaday inay ku biiraan shirkadda. reer weyn iPad. Maanta, Apple waxay qaadatay go'aanka ah in la casriyeeyo aaladda loo yaqaan 'iPad 9,7 inch'. Cusboonaysiintaan sidoo kale waxay ku lug leedahay kor u qaadida cabirka garabka, kaas oo aadaya 10,2 inji.
Apple waxay daaha ka qaadaysaa iPad cusub, jiilka 7, oo leh jaantus cabbirkiisu yahay 10,2 inji
Halkii inji ee '9,7 inji' oo qaar loo adeegsan karo, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la soo bandhigo shaashadda Retina ee dhexroorrada 10,2. Marka laga hadlayo waxyaabaha gaarka loo leeyahay, iPadkan cusub sida iska cad uma noqon doono mid awood badan sida 'iPad Pro', waa wax macquul ah, laakiin wali waxay ku hoos jirtaa guntiga. Apple runtii waxay ku biirtay chiss A10 Fusion chip, isku mid ayaa laga helay 7 iPhone 7 iyo 2016 Plus. Taasoo ah inay noqotaa in kabadan ku filan isticmaalka maalinle ah. Laakiin tan waa in la tixgeliyaa haddii aad u malaynaysid inaad baahiyo waaweyn qabaan. Intaa waxaa sii dheer, kiniinku sidoo kale wuxuu ka faa'iideysanayaa Smart Connector, taas oo micnaheedu yahay inaad ku isticmaali karto Smart Keyboard-ka.
la jaan qaada Smart Connector
Inta soo hartay, iPadkan cusub wuxuu ku shaqeeyaa ipadka loo yaqaan 'ipOSOS', oo ah nooc laga soo qaatay macruufka oo loo habeeyay ipadka. La jaan qaadida Apple Pencil sidoo kale macquul ahaan waa qayb ka mid ah, iyo sida Apple ku dhawaaqday, macaamiisha iibsatay aaladda Apple cusub waxay heli doonaan hadiyad sidii hal sano oo macaamiil ah adeegga Apple TV + adeegga qulqulka. Qarnigan 'IP 7 jiilka' waxaa laga iibin doonaa 389 € oo ah nooca Wi-Fi kaliya. Moodellada mobilada, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la isticmaalo ugu badnaan 529 €. Barnaamijyo hordhac ah ayaa furan, keenidu waxay imaan doontaa bisha Sebtember 20.
Apple waxay qaabeysaa iPhone 11, halkan waa astaamaheeda oo dhan
Apple: Safari iyo Farriimaha ayaa iPhone ka sii Wanaagsan
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/apple-met-a-jour-sa-gamme-dipad-en-introduisant-un-nouveau-modele-102-pouces-327025